SAWIRRO:- Madaxweynaha Gaas oo dhagax dhigay Wadada Ceel-daahir-Ceerigaabo. – SBC
SAWIRRO:- Madaxweynaha Gaas oo dhagax dhigay Wadada Ceel-daahir-Ceerigaabo.
Posted by SBC Editor on May 22, 2015 Comments
Madaxweyenaha Puntland Cabdiwali Maxamed Cali Gaas ayaa goor dhaweyd gaaray magaalada Bosaso ,waxaana Banaanka hore kusoo dhaweeyey Masuuliyiinta gobolka iyo kan degmada ,haweenka ,Odaayaal,iyo Dhalinyaro.
Madaxweynaha ayaa soo dhaweyn kadib loo gudbiyay Madaxtooyada Bosaso Halkaas Ayuunna Kula Hadlay Warbaahinta.
Madaxweynaha inta Uusan Soo Galin Magaaladda ayaa waxaa Uu Maanta deegaanka ceel-daahir ee Gobolka Barri ka dhagax dhigay wadada Ceel-daahir iyo Ceerigaabo oo ay dawladda iyo shacabka reer Puntland iska kaashanayaan dhismaheeda.
Hoos ka dhageyso codka Gaas: